योग गर्ने कि जिम जाने? – सजल सन्देश
By Sajal sandesh	 On१७ कार्तिक २०७८, बुधबार ०३:२८
मानिसको मांसपेशी–प्रणाली असाधारण छ । हाम्रा मांसपेशीहरूले अद्भुत काम गर्न सक्छन् । मांसपेशीहरूले काम गर्ने क्षमतालाई बढाउन तिनलाई बलियो एवं एकदमै लचिलो राख्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाईंले भारी तौल उचाल्ने व्यायाम गर्नुभयो भने, तपाईंका मांसपेशीहरू ठूला देखिन्छन्, तर तिनमा लचिलोपन हुँदैन । तपाईंले ठूला–ठूला मांसपेशीका गाँठागुँठी भएका मानिसहरूलाई ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, उनीहरू राम्रोसँग नमस्कार गर्न सक्दैनन् ! उनीहरू निहुरिन समेत सक्दैनन् ।
तपाईंभित्र भौतिकभन्दा परको आयाम उजागर भयो भनेमात्र, अस्तित्व बिस्तारै तपाईंसामु लाखौँ रूपहरूमा प्रकट हुन्छ । जुन चिजहरू अस्तित्वमा छन् भनेर तपाईंले कहिल्यै कल्पना समेत गर्नुभएको छैन, ती तपाईंको निम्ति वास्तविक बन्दछन्, किनकि भौतिकभन्दा परको आयाम जीवन्त बनेको हुन्छ ।